Heshiiskii ugu horreeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wada hadal guul ku dhammaaday.
Heshiiskii ugu horreeyey
Publicerat måndag 22 mars 2010 kl 11.08
Habeenimmadii sabtida ayaa lagu heshiiyey heshiiskii ugu horreeyey ee mushaarka qaar ka mid ah shaqaalaha iyo shaqa bixiyeyaasha, waxa lagu magacaabo ”avtalsrörelse”.
Halkaasina oo 130 kun oo ka mid ah shaqaalaha xafiisyada warshaduhu heshiis loogu ogolaaday in mushaarkooda kor loo qaado 2,6% muddo sannad iyo bar gudaheed, marka laga bilaabo bisha abriil ee sannadkan. Intaa waxaa dheer heshiisyada lagu gaaro goobaha shaqada.
Uruka daladda ururrada shaqaalaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno LO, waaxdiisa warshadaha ayaa sidoo kale sheegey in heshiis guud ee ururrada shaqaalahu la gaaraan shaqa bixiyeyaasha uu yahey mid aan weli sal dhigan. Iyadoona su’aash ugu muhiimsani tahey habka ey shaqa bixiyeyaashu ula dhaqmaan shaqaalaha laga kireeysto shirkadaha madaxa bannaan.
Madaxa ururka shaqaalaha ee warshadleeyda IF metal Stefan Löfvén, ayaa sheegey inuu ka xun yahey heshiiska ey wada gaareen shaqaalaha xafiisyada warshadleyda iyo shaqa bixiyeyaashu, iyadoona aaney midda lagala tashan ururka daladda shaqaalaha ee LO.
Dhammaadkii toddobaadkii ina dhaafay ayaa sidoo kale waxaa istaagay wadahadal u socday ururka shaqaalaha ee baayacmushtarka dukaanleeyda iyo shaq2aabixiyeyaasha.
Madaxa shaqabixiyeyaasha dukaanleeyda Dag Klackenberg ayaa sheegey in laga war sugo halka uu ku dambeeyo heshiiska shaqaalaha warshadleeydu.